Libya: “Mirehitra i Gaza!” firaisankinan’ny bilaogera amin’i Palestina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2018 7:55 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny desambra 2008)
Nandritra ny fipetrahako teo amin'ny mpanao volo mahazatra ahy indrindra, rendremana teo aho. Nandritra ny fotoana ‘nahataitra’ ahy, manahy aho fa miharatsy indrindra ny fifandraisako amin'ny vehivavy hafa ary nanapa-kevitra aho hijery izay ao amin'ny fahitalavitra mandokandoka hita tao amin'ny efitra fiandrasana.
Ny tena nanintona ny fifantohako dia ny ra sy ny sehatra ahitana ny olona mitomany. Tsy teo amin'izay nahatonga ahy hahamarika ilay fandaharana ny feo tamin'ny voalohany. Nakariko ny feo ary rendrika tao anatin'ny vaovao mafana avy any amin'ny zaratany nobodoina aho. Fandaharana manokana momba an'i Gaza avy amin'i Al-Jazeera io. Nahahendratra ahy ny horohoro ary fantatro tamin'izay fa efa roa andro farafahakeliny no nisian'izany. Nandao ilay mpanety aho taoriana kelin'izany ary tonga dia nitodi-doha nody sady nieritreritra hoe ahoana moa aho no tsy naheno momba izany mihitsy ? Eny nitranga izany rehefa mba tsy niserasera na nijery fahitalavitra nandritra ny andro vitsivitsy ianao: nianjera izao tontolo izao.
Nitatitra avy amin'ny zoro maro ny resadresaka tao amin'ny bilaogy saingy amin'ny ankapobeny dia nifantoka tamin'ny alahelo sy ny firaisankina amin'ny Palestiniana, ny fahatsapana ho tsy manana hery – ankoatra ny fahatafintohinana sy ny faharomotana manoloana ny hetsika ataon'i Israely sy ny tsy fihetsehan'ny Arabo.
Ny lohateny hoe “Mirehitra i Gaza” dia ao anaty tokotaniny mainty matevina ao amin'ny Tasnim, izay be feo hatrany eo amin'ny fanehoan-keviny, ary nanampy afisy mainty fotsiny miaraka amin'ny fanambaràna.
Tahaka ny tsy afa-niloa-bava ireo bilaogera hafa ary nisafidy ny hamoaka sary sy sariitatra amin'ilay korontana sy ny tsy fahitana fahalianan-drà tanterahana ao Gaza izay hitan-dry zareo maso amin'ny alalan'ny fampitam-baovao.
“Midaroka an'i Gaza i Israely – Firariantsoa taombaovao, Opss! Fanomezana [taombaovao][sic]”, hoy ny hiakan'i Naohama raha mifanandrify amin'ny taombaovao islamika sy ny fiavian'ny taombaovao gregoriana ity hetsika an-habakabaka ity.
Nasim Libya manontany “inona koa????” ary ny sariitatra navoakany dia maneho izay misy any am-pivarotan'i Gaza amin'izao fotoana izao.
Toa miaritra izay tsy azo ihodivirana ry bilaogera Musa sy Julia, olon-droa mivoy [bisikileta] manodidina an'i Mediterranea.
“You may have wondered why I haven't posted anything about Ghaza. The reason is that it is an inescapable presence and source of pain shared by all to such an extent that the news are largely watched in a thick, loaded silence.”
Mety hanontany tena ianao hoe maninona aho no tsy mamoaka na inona na inona momba an'i Gaza. Ny antony dia zavatra tsy azo ihodivirana io ary miteraka fangirifiriana ifampizaran'ireo rehetra mijery ny vaovao ao anaty fahanginana lalina sy mavesatra.
Reny Libyana My Being Days mahazo ny raviravin-tanana tsapan'ny maro.
Any aminao vahoakan'i Gaza ny eritreritro…
Malahelo aho fa tsy afa-manao na inona na inona loatra ankoatra ny mivavaka ho anareo…
Mahatsiaro menatra aho amin'ny maha-Arabo fa tsy nanetsika ny rantsa-tanany mba hanampy akory ny mpitondra anay…”
Etsy ankilan'izany, raha niantso azy ny reniny hijery ny Al-Jazeera, White African naka ny fonon-tanany mba “hilaza izany araka izay hita”.
“Adino ny mety ara-politika, tsy afaka manao izany ianao amin'isiraely, toa tsy manana ny toetra mahaolombelona ireo, ary tsy manampy ihany koa ny vaovaon'ny tandrefana, ny lohatenin-dry zareo hoe ‘namotika ireo toeram-piarovan'ny Hamas ampolony manerana an'i Gaza ny voromby mpiady Isiraeliana’ no mahafeno tanteraka ny lainga, mametraka ny voambolana ‘toeram-piarovan'ny Hamas’ ry zareo ho fanalana tsiny an’ Isiraely amin'ny hetsika ataony.
ny marina dia rehefa manokatra ny fahitalavitra ka mahita sivily, ankizy eny an-dalana ho any an-tsekoly, ary misy apondra aza maty, ka karazana toeram-piarovana inona no resahin-dry zareo.
Ary ho an'ny governemanta ejipsiana, tsotra ny teniko fa rikoriko amin'i hussni mubarak aho, fialantsinin'olona…
ny fanapahan-kevitra nataony voalohany dia ny nametraka tanks [fiara mifono vy] any an-tsisitany hosorohana ny firohotan'ny Palestiniana tsy hiditra ao Ejipta!!
Mijery fantsona arabo hafa ianao dia inona no hitanao? ‘lasopy musalsalat, resadresaka, hira, konseritra bal bla [..] [sic]”
Fragola mampahafantatra antsika fa nanao fanentanana amin'ny hanaovana fanomezan-dra ny Volantsinana Libyana hanampiana ireo maratra any Palestina.
Manontany tena ny bilaogera hafa hoe ahoana izany ny iresahana ny vaovao amin'ny ankizy raha feno tononkalo mamaky fo momba an'i Palestina ireo fantsona natao ho an'ny ankizy.
Tsy hitan'i Anglo Libyan izay hazavaina amin'ny zanany ny zavamisy fa voamarika anefa fa fantatry ny ankizy ihany ilay izy na sia izany aza.
“Hitan'ny ankizy avy amin'ny vaovao ihany ary tsy vaovao arabo fa avy amin'ny BBC news indrindra indrindra fa misy bibidia ratsy antsoina hoe “Tafika Isiraeliana” mamono vahoaka izay ataon-dry zareo fahirano sy ampijalian-dry zareo ratsy kokoa noho ireo biby hidiana anaty fisoko makarakara nandritra ny herintaona mahery”